सावधान ! सेक्स पावर बढाउने यी ८ काम नगर्नुहोस्, ज्यान जान सक्छ «
सावधान ! सेक्स पावर बढाउने यी ८ काम नगर्नुहोस्, ज्यान जान सक्छ
प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७५, बुधबार १२:५५
काठमाडौँ । अहिले सेक्स पावर बढाउने चक्करमा धेरै मानिसको स्वास्थ्य बिग्रिंदै गएको छ। हाल बजारमा पनि यसका नाममा थुप्रै किसिमका औषधीहरु पाईन्छ्। राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चार माध्यममा पनि निकै विज्ञापन आउँछन्। यस्ता विज्ञापनको चक्करमा लागेर सेक्स पावर पढाउँछु भनेर लाग्दा स्वास्थ्यमा त असर पर्न नै, अर्कोतिर पैसाको पनि सत्यानाश हुन्छ। जसको नकारात्क असरका कारण मानिसहरुको ज्यान पनि जान सक्छ।
१) बच्चाबेलाको गल्ती भगाउने औषधि
२) तेलले मसाज
धेरैजसो विज्ञापनमा अमुक तेलले मसाज ग-यो भने सेक्स पावर बढ्छ र भरपुर आनन्द आउँछ । सत्य कुरा यो हो की कुनै पनि तेलले सेक्स पावर बढाउँदैन र यस्ता तेलले मसाज गर्न कसैले उसको व्यापार बढाई दिन्छ भने उ मात्रै ठगिएको हुन्छ ।
३) अश्लील किताबको जाल
४) अण्डा खाएर पैदा हुने इच्छा
६) रक्सी खाएर सेक्स गर्नु
७) जोगीहरुले बेच्ने औषधि
८) लिंग बढाउने उपाय र तन्त्रमन्त्र
कहिले काही हामी सेक्स टोय र लिंक बढाउने उपायका विज्ञापन सुन्ने गर्छौं । यस्ता कतिपय उत्पादनहरुले फाइदा पु¥याउदैन । मेडिकल साइन्सका अनुसार सेक्समा हुने आनन्दसँग लिंगको लम्बाईको कुनै नाता सम्बन्ध हुँदैन। यसका बाबजुत पनि मानिसहरु यस्तो गलत उपायका पछि दौडिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै मानिसहरु तन्त्र मन्त्र र अन्धविश्वासको शिकार समेत हुने गरेका छन् । यस्ता उपाय गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले फाइदाजनक हुँदैनन्।